DHAGEYSO Shir looga hadlay arimaha xaqootiga Somalida oo ka dhacay Jabuuti. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Shir looga hadlay arimaha xaqootiga Somalida oo ka dhacay Jabuuti.
Shir looga hadlayay xaalada dadka xaqootiga Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Yemen ayaa ka dhacay magaalada Jabuuti waxaana ka qayb galay qaybaha ku shaqada leh arimaha qaxootiga gaar ahaan hay’ada qaxootiga qaybaheeda wadama Jabuuti iyo Somalia.
Sidoo kale kulankaas waxaa goob joog ka ahaa hay’ada qaran ee dowlada Somalia u qaabilsan arimaha qaxootiga iyo hay’ada caalamiga ee socdaalka aduunka.
Dhamaan xubnihii halkaas ku kulmay waxay isla meel dhigeen qodobadii ay kawada hadleen ayadoo ugu danbayntiina warbixin laga soo saaray xaalada dadka qaxootiga Soomaaliyeed ee wadanka Yemen ku nool.
Safiirka Somalia u matala dalka yemen ayaa sheegay in ujeedka shirkaan uu ahaa sidii ayadoo la ilaalinayo badqabka shacabka Somaliyeed dib loogu soo celin lahaa dalkooda hooyo.
Wasiirka dib u dajinta maamulka Puntland oo ka mid ahaa masuuliyiintii shirkaas ka qayb gashay ayaa shacabka Somaliyeed ugu baaqay inay garab siiyaan dowladooda si looga baxo dhibaatooyinka ay ka mid yihiin Tahriibka iyo xaqootiga ee mudo badna ay ku soo jireen dadka Somaliyeed.
Gudoomiyaha hay’ada qaxootiga qaranka Soomaaliyeed oo isna madasha ku sugnaa ayaa sheegay in shirkaan uu dabo socday mid horay loo qabtay waxyaabo badana la isla meel dhigay si howlo badan ay u sahlanaadaaan.
Dalka Yemen oo qudhiisa ay dhowr sano ka taagan yihiin dagaalo sokeeyo oo haligay nolosho kumaan qof ayaa waxaa ku sugan boqolaal qaxooti Somali ah oo maciin biday kadib markii dalkooda hooyo ay dagaalo ku daba dheeraadeen sanooyin badan.
← DHAGEYSO Dagaal beleed ka jiro degaano ka tirsan wajeer oo saameyay isku socodka bulshada
Zidane Oo Sharaxay Sababta Xalay Loo Bedelay Cristiano Ronaldo →